धरानमा भरतपुरको झल्को किँन ? – Everest Dainik – News from Nepal
धरानमा भरतपुरको झल्को किँन ?
धरान, असार २५ । दोस्रो चरणको मतगणनामा ‘भरतपुर काण्ड’ दोहोरिने डर धेरैलाई लागेको थियो । यही डरका कारण धेरैवटा मतगणनास्थलमा डोरीको बार पनि लगाइयो । तर, धरान उपमहानगरपालिकाको मतगणनास्थलमा भने झण्डै-झण्डै भरतपुरकै झल्को देखिएको छ ।
भरतपुरको झल्कोकर्मचारीले एमालेको सूचीमा भोट थपेको र संघीय फोरमको सूचीमा कम भोट जोडेर गडबडी गरेको छानविनपछि खुलेको छ ।
अहिलेसम्मको गणनामा नेकपा एमालेले अग्रता लिइरहेको छ भने नेपाली कांग्रेस दोस्रो र माओवादी तेस्रो स्थानमा छन् । (अनलार्इनखबरबाट साभार गरिएको )